Umhlangano wabachwepheshe be-SUSE eBarcelona | Kusuka kuLinux
Iningi labafundi be-FromLinux bangamaSpanish futhi kuleli kukhona ukunyakaza okukhulu kakhulu okuzungeze isoftware yamahhala (ukuthi kwesinye isikhathi ngiba nomona ngempilo), lokhu kuguqula amathuba okuthi imicimbi eminingi ibanjelwe emthonjeni ovulekile kanye nokuthi imiphakathi ishintshane futhi inikele eminye eminingi. Kulo nyaka iBarcelona izoba nenjabulo yokuba umphathi we- umhlangano wabachwepheshe be-SUSE (i-SUSE Expert Days), lapho abasebenzisi nochwepheshe abavela kulo mphakathi omuhle kakhulu bahlangana khona ukuze babelane ngemibono, bakhombise inqubekela phambili futhi batadishe isimo se-software ecosystem yamahhala.
Umcimbi uzokwenzeka e- IWorld Trade Center yaseBarcelona lokhu NgoFebhuwari 22th futhi izofaka izinkulumo nemiboniso yezobuchwepheshe, izosebenza njengo-un isikhungo esikhulu sokuxhumana nxazonke ze-SUSE futhi njengesikhala lapho inkampani izozama ukukhombisa umhlaba izinzuzo zokusebenzisa isoftware yamahhala kanye nendlela yokwandisa ukuthengiswa kwezinsizakalo, ukudala izivumelwano ezintsha nokuhlanganisa inqubekela phambili emphakathini oshiwo.
Ngalolu suku, inkampani izokwethula izindaba zayo zakamuva zalo nyaka ku-2018 kochwepheshe baseCatalan emkhakheni we-IT kusuka kochwepheshe be-SUSE. Ngaphezu kwalokho, inkampani izokwethula indlela yayo 'Isakhiwo Esivulekile, umthombo ovulekile', lapho ifuna ukusiza amakhasimende nabalingani ukuguqula izinkampani zabo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha bemithombo evulekile, ukudala ibhizinisi elisheshayo ngenxa yezixazululo ezintsha ze isitoreji nokusungula usebenzisa ingqalasizinda echazwe yisoftware yomthombo ovulekile yakamuva. Ngesikhathi somcimbi, ababekhona bazokwazi ukubamba iqhaza ezingxoxweni zobuchwepheshe nabanye ochwepheshe emkhakheni wabo, futhi babelane ngolwazi futhi bakhe ubudlelwano obusha emphakathini womthombo ovulekile.
Ngakolunye uhlangothi, abangani abavela eSpain bazokwazi ukujabulela iSUSE Expert Days 2018 ngalo Mashi 22 eMadrid (Kinépolis - Pozuelo de Alarcón) naseValencia (Paterna) ngenyanga ezayo kaMeyi.
Noma ngubani onentshisekelo yokuya kunoma iyiphi yale micimbi angabhalisa lapha. Kusuka kule nkantolo ethobekile isimemo sokwabelana nomphakathi omkhulu we I-OpenSuse, esikhulume ngayo kaninginingi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Umhlangano wabachwepheshe be-SUSE eBarcelona